Etu ị ga - esi amata taya agụzigharị-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Otu esi amata taya edeghachitere
Oge: 2020-08-27 Hits: 39
Kobe Steel bụ ụlọ ọrụ nchara nke atọ na Japan. Kobe Steel kwetara na 2017 na ọ metụtara data arụmọrụ nke ụfọdụ ngwaahịa aluminom ma nye ha. Akụkụ nke itinye aka sara mbara nke ukwuu, gụnyere ọ bụghị naanị Toyota, Nissan, Mitsubishi na Subaru. , A na-ewebata ụlọ ọrụ ụgbọ ala ndị Mazda nke ndị Japan, ọtụtụ ụlọ ọrụ ụgbọ ala na-abụghị ndị Japan na-ejikwa Kobe Steel, nke dọtara uche ụwa.
N'ezie, ọ bụghị naanị adịgboroja nchara Kobe, mana ọtụtụ ngwa ndị gbara anyị gburugburu juputara na adịgboroja, na n'etiti ha, adịgboroja dị oke njọ na ogo nke ihe ọghọm nchekwa bụ taya. Ọtụtụ ndị enyi ụgbọ ala kacha dị egwu mara na ha nwere ike ịbụ adịgboroja, mana ha kwenyesiri ike na ha na-azụ ezigbo ngwongwo, nke jọgburu onwe ya.
Alsgha ụgha nke taya kachasị gụnyere mbubata mbugharị na iwegharị, yabụ ka anyị ghara ikwu maka mbubata mbata. Tumadi na-ekwu okwu banyere agụgharị taya.
Enwere ike ịmata njirimara nke taya na-emegharị emegharị tumadi site na ile anya, igwu ala, na ịkọ ọkọ.
Agba nke taya ọhụrụ ahụ bụ ihe okike. Na iji mee ka taya ahụ dị ọhụrụ, a na-esezi taya ndị agụgharịrị mmanụ mmanụ nke taya, nke na-egbukepụ egbukepụ karịsịa.
I nwekwara ike ile anya n'ime taya ahụ iji chọpụta ma ọkwa ochie na nke ọhụrụ dị n'otu. Lelee akara ụbọchị nke taya maka usoro nhazi doro anya, ọ bụrụ na ọ bụla, ọ dịkwa adị.
Lelee ihe ndị ahụ na-azọ ụkwụ na nzọ ụkwụ taya na ntutu dị n'akụkụ mgbidi. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ha na-adịgboroja adịgboroja. Ebe ọ bụ na aji taya dị nro dị nro, ọ ga-akaghị aka n'ime kilomita ole na ole. N'oge a, n'agbanyeghị etu ike teknụzụ na-agụgharịghachi si dị ike, a gaghị enwe ike iweghachi ntutu taya ahụ nke ọma.
Tụkwasị na nke a, ị nwekwara ike pịa nzọ ụkwụ ahụ, taya ọhụrụ ahụ agaghị ahapụ mkpịsị aka aka, na akwa a na-agagharị na ya nwere akwa nke wax, a ga-enwe mkpịsị aka mgbe o metụrụ ya aka.
A gaghị ewepụ mbọ aka roba na akara akara na nzọ ụkwụ ahụ n'ụzọ dị mfe, a na-agbakwunye taya ndị ahụ edegharịrị azụ, nke na-enweghị ntụkwasị obi nke ukwuu ma nwee ike iwepụ ngwa ngwa. E nwekwara bụbu ụlọ ọrụ mmepụta ihe ụbọchị nke taya, ị nwekwara ike ịlele ma ọ bụ rụrụ.
Site na ihe siri ike na-akụtụ na tread, taya ọhụrụ agaghị ahapụ ọkọ, na taya ndị agụgharịrị na-ahapụkarị ịchacha.
Readghagharị taya agaghị eme ka anyị daa ọghọm akụ na ụba, kamakwa ọ ga-ebute ihe mberede okporo ụzọ nke ukwuu. Anyị ga-akpachara anya!
Previous: Ike nke ọchị
Ọzọ: Ugboro ole ka taya ụgbọ ala na-agbanwe?